လဖိုင်| January 16, 2013 | Hits:6,739
mr TM January 16, 2013 - 7:53 pm မြန်မာ့တပ်မတော်သားတို့ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြပါတော့စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်လို့တော့တပ်မတော် ကပြန်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတပ်ပြေးအဖြစ်နဲ့ထောင်ကျအုံးမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ထောင်အကြောင်း တော့သိမှာပါခဲရေတိုက်ခဲရေခြိုးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တောင်ကြာကြာမခံပါဘူး၊နယ်စပ်မှာဘဲ နေပြီးလုပ်ကိုင်စားနေရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှာပါ၊ကချင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပြန်လွှတ်ပေလို့ မြန်မာတပ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့တောင်မရပါဘူး။
Reply Tide January 17, 2013 - 1:40 pm You’re right. These soldiers will be executed as soon as they get back to their barracks. They would not join the Burmese Hitler’s army in the first place. People with the right mind must never join this brutal regime. It shows us that there are many stupid people in Burma.
Reply Chinlay January 16, 2013 - 8:41 pm I have never seen and heard the Burmese army doing like this.
Reply ဗမာ January 17, 2013 - 11:01 am မြန်မာစစ်တပ်မှအောက်ခြေတပ်သားများနားလည်ဖို့သင့်ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့အခုလိုအသက်ပေးပြီးလုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေကောင်းစားဖို့လဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဦးနှောက်နဲ့လူသားတွေ စက်ရုပ်တွေမဟုတ်ကြဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကိုပေးကြွေးနေတာ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ငွေတွေမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူ့ငွေတွေသာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် KIA ကိုကျေးဇူးတောင်တင်ရမှာပါ။
Reply ဖိုးလုံး January 17, 2013 - 11:12 am “ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းမှူး ကျော်ကျော်ဝင်းက လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ သူတွေကို သတ်ခဲ့လို့ ပြောတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ ကျန်ခဲ့တုန်း အဖမ်းခံရတာ” ဟု သူက ပြောသည်။”
Reply တောင်ပေါ်သား January 17, 2013 - 4:40 pm ကိုယ့်အတွက်အသက်စွန့်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြတဲ့ တပ်မတော်သားများရဲ့ အသက်နှင့်ဘဝကိုတောင်ပြန်လည်းငဲ့ကြည့်ပပေးတဲ့ ဗမာ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့ ကမ္ဘာမှာရှာမှရှားတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဓါတ်ပါပဲ။ မွတ်စလင်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမား တွေတောင်သူတို့လောက်မရိုင်းဘူး။ အင်း . . . ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတောင်စိတ်လိုက်မာန်ပါသတ်ရဲနေမှတော့ ဒီလောက်တော့အပျော့ပဲနေမှာပေါ့။ တစ်ခုအံ့သြဖို့ကောင်းတာက လူ့သိက္ခာနှင့်တန်ဖိုးကို လုံးဝနားမလည် တန်ဖိုးမထားတဲ့တပ်မတော်ရဲ့လုပ်ရပ် ထောက်ခံချီးကြူးထောမနာပြုကြတဲ့ လူတွေရဲ့အသိညဏ်ရေချိန်ကိုပါပဲ။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေသတ်ဖို့နှင့် အမိန့်ကို ဘယ်တပ်သားတစ်ယောက်တစ်လေကမှ မဖီဆန်ကြတာပဲ။ လူသားဆန်တဲ့လူသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ရှားပါးရသလားဆိုတာကိုပဲ အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်။
Reply ကိုနိုင်မြန်မာ January 17, 2013 - 10:09 pm လေးစားပါတယ်တပ်မတော်လူကြီးများ ဘာတွေစဉ်စားတာတုန်း ၇ဲဘော်၇ဲဘက်စိတ်၇ှိ၇မယ်ဆိုတာဘယ်ေ၇ာက်သွားလဲဗျာ
Reply Mr Kian January 19, 2013 - 7:05 pm Thats why we call Burma/Bama Army…